Iyo yakazara yakajeka sumo yeMegestrol acetate powder | AASraw
Iyo yakazara yakajeka sumo yeMegestrol acetate powder
/Blog/Megestrol acetate/Iyo yakazara yakajeka sumo yeMegestrol acetate powder
Posted on 07 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Megestrol acetate. Izvo zvine 0 Comment.
Zvose pamusoro peMestrol acetate powder
1.Megestrol acetate maitiro (CAS: 595-33-5)
2.Iiestestate acetate work?
3.Iyo megestrol acetate powder yakatorwa sei?
4.Wi zvakanyanya kuchenjerera Usati watora megestrol acetate powder?
5. Ndinofanira kutora seigestrol acetate powder?
6.Ushandise Megestrol acetate Powder mune dzimwe nzvimbo
7. Chii chandinofanira kuziva pamusoro pokuchengetedza uye kurasikirwa kwemishonga iyi?
9.Megestrol Acetate Kushandisa Kuwedzerwa Kwemafuro Kunofanira Kunyatsofungiswa
10. Ndeipi iyo inonyanya kukosha yeruzivo rwandinofanira kuziva pamusoro peMegestrol Acetate powder?
11.Ndipi pandingawana mamwe mashoko pamusoro paMegestrol Acetate?
I.Megestrol acetate powder Basic Characters:
Name: Megestrol acetate powder
Storage Temp: Kutsigira kwekamuri
1. Megestrol acetatekuongororwa (CAS:595-33-5)
Megestrol acetate powder rudzi rwehomoni inorapwa. Inonziwo Megace kana megestrol (595-33-5). Iyo munhu akaita shanduro yehomoni progesterone. Progesterone imwe yehomoni dzevakadzi asi varume vanobudisawo zvishoma zvayo.
Megestrol acetate powder ndiyo kurapa kwemakirini anotevera akadzoka kana kupararira kubva kwaakatanga.
• kenza yemazamu
♦ mucheche wechibereko
Ichowo chirwere chekushaya chido. Chiremba wako angakukurudzira kuti uzvitore kana iwe uine uremu hunokonzerwa nekenza kana kurapwa kwako. Vanachiremba vangashandisawo sekurapa kwevakadzi vane moto unopisa nekuda kwekenza kana kurapwa kwayo.
2. Sei Megestrol acetatekushanda?
Megestrol acetate inonzi hormone therapy. Mahomoni ndiwo makemikari ayo anogadzirwa nemaronda mumuviri, anopinda muropa uye anokonzera mimwe mimwe michina. (Somuenzaniso, hormone testosterone yakaitwa mumakumbo acho inokonzerwa nehukama hunhu hwakafanana nekudzika izwi uye kuwedzera bvudzi). Kushandiswa kweHormone therapy kuporesa kenza kunobva pane zvakatarisa kuti zvinogamuchirwa zvehomoni zvakasiyana-siyana zvinoda kuti sero rikura riri pamusoro pemamwe tumarara masero. Utachiona hweHormone huchishanda; kudzivisa kubudiswa kwemamwe hormone, kudzivirira hormone receptors, kana kushandura makemikari akafanana nemasikironi anoshandiswa, asingagoni kushandiswa nechiremera chemaitiro. Mhando dzakasiyana dzemishonga yehomoni inorongwa nemabasa avo uye / kana rudzi rwehomoni inoshandiswa.
Megestrol acetate is a progestin (chimiro chakaitwa nemunhu we progermone hormone). Iine zvinhu zvinopindira neyero yakagara isrogen. Izvi zvinovhiringidza nekukurudzirwa kwesero kuwedzera muestrogen inotenderera masero emuviri. Panewo zvakare kufungidzirwa kuti ichine mhinduro chaiyo pachigadziko cheusterine wall (endometrium).
Chimwe chikamu chinokonzerwa neMegestrol acetate chave chiremu. Iyo chaiyo inogadziriswa nemigumisiro iyi haina kunyatsojeka, zvisinei nemigumisiro inoita kuti kuwedzerwa mumuviri wenyama. Kushandisa zvakashata izvi, Megestrol acetate yakadzidzwa uye inoshandiswa kurapa kurasikirwa kukuru kwekudya (anorexia), kuparara kwemisumbu (cachexia) uye kurasikirwa kweropa kunosangana nekenza neAIDS.
3. Ndini inegestrol acetate powder yakanyatsotorwa?
Shandisa mushonga uyu (Megestrol acetate powder) sezvawakarayirwa nachiremba wako. Verenga zvose zvawakapiwa. Tevera mirayiridzo yose pedyo.
• Kuti uwane rubatsiro rwakanyanya, usapotsa maitiro.
• Ramba uchitora mushonga uyu (Megestrol acetate powder) sezvawakaudzwa nachiremba wako kana mumwe mupi wehutano, kunyange iwe unonzwa zvakanaka.
• Tora miviri isinganzwisisi pakarepo paunofunga nezvayo.
♦ Kana iri pedyo nenguva yenguva yako inotevera, rambai mazamu akanganisa uye dzokera zvakare kune nguva yako chaiyo.
4. Ndezvipi zvingwarira zvekare Usati watora megestrol acetate powder?
• Taurira chiremba wako uye chiremba kana iwe uri yeergoric kune megestrol acetate powder, chero mimwe mishonga, kana chero ipi zvayo isina kushandiswa mu megestrol acetate powder, kusimudzirwa, kana kumira zvakanyanya. Kumbira chiremba wako kana wemhizha kuti uwane mazita emishonga isina basa.
• Taurira chiremba wako uye chiremba wemishonga mishonga yemishonga uye yekunyoreswa, mavitamini, zvigadzirwa zvekudya, nemishonga yemiti uri kutora kana kuronga kutora. Iva nechokwadi chekutaura ma antibiotics uye indinavir (Crixivan). Chiremba wako angave achida kugadzirisa maitiro emishonga yako kana kuongorora iwe zvakanyatsonaka nokuda kwemigumisiro yechirwere.
• Taurira chiremba wako kana iwe wakambove uine ropa rekuvhara kupi zvako mumuviri, chirwere cheshuga, chirwere cheshuga, kana zvepvo kana chirwere chechiropa.
• Taurira chiremba wako kana uri nepamuviri, uronga kuva nepamuviri, kana kuyamwisa. Kana iwe ukava nepamuviri uchitora megestrol acetate powder, dana chiremba wako pakarepo. megestrol acetate powder inogona kukuvadza fetus. Usafudza zvishoma apo iwe uri kutora megestrol acetate powder.
• Unofanirwa kuziva kuti megestrol acetate powder inogona kupindira nekanguva yekuenda kumwedzi (nguva) kuvakadzi. Zvisinei, haufaniri kufunga kuti haugoni kutora pamuviri. Shandisa nzira yakatendeseka yekudzivirira kubata pamuviri kudzivirira kubata pamuviri.
♦ Kana uri kuvhiyiwa, kusanganisira chirwere chemazino, munguva kana kuti mushure mekunge wapora, taura chiremba kana mazino kuti iwe uri kutora megestrol acetatepowder.
Tora chaizvo sezvinorayirwa nachiremba wako. Usatora muhomwe huru kana shoma kana kwenguva yakareba kupfuura yakakurudzirwa. Tevera mazano ekunyorwa kwechirairo yako.
Bvisai kusimwa mumuromo (mvura) zvakanaka musati mayera mukana. Edzai mvura nemvura yakakosha yeiyo kapu kana mushonga wemukombe, kwete nehafura yefurafura yenguva dzose. Kana iwe usina chirongwa chekuyera-chiremba, bvunza chiremba wemishonga kune imwe.
Megace ES ine yepamusoro yakanyanya ye megestrol acetate powder kupfuura Megace. Kana chiremba wako achichinja mararamiro ako, simba, kana rudzi rwe megestrol acetate powder, zvido zvako zvinogona kuchinja. Kumbira mushonga wemapurisa kana iwe uine mibvunzo pamusoro pemishonga yaunowana pane homisi.
Zvido zvako zvinogona kuchinja kana iwe uchivhiyiwa, uri kurwara, uri pasi pedambudziko, kana uine hutachiona. Usashandure mushonga wako wemishonga kana purogiramu pasina zano rechiremba wako. Chengetedza pane yechando yekunze kubva pakusvibisa uye kupisa.
6. Shandisa Megestrol acetatePoweri mune dzimwe nyika
Kuberekwa Chikamu X [ona Manyevero uye Kuchengetedzwa (5.2)]. Hapana huwandu hunokwana hwehutachiwana hwehutachiwana hunowanikwa pamakiriniki akakodzera. Rats akaberekwa akabatwa nehana shoma yeMegestrol acetate powder (0.02-fold yakakurudzirwa chirwere chechipatara) yakaguma nekuderedza kuderedza uwandu hwema fetal uye nhamba yekuberekwa kwemazuva ese, uye kubata kwemafuro ehurume.
♣ Vanaamai vanoyamwisa
Nemhaka yezvingava nemigumisiro yakaipa kune mwana achangoberekwa, kuyamura kunofanira kubviswa kana Megestrol acetate powder inodiwa.
♣ Kushandisa Vana
Kuchengetedzwa uye kubudirira muzvirwere zvevana hazvina kusimbiswa.
Zvidzidzo zvechipatara zveMegestrol acetate powder mukurapa anorexia, cachexia, kana kusatsanangurwa kwakakosha kurasikirwa mune varwere vane AIDS haina kuisa nhamba yakakwana yevarwere vane makore gumi nemakore ekure uye vachiwedzera kuti vaone kana vakagamuchira zvakasiyana nevarwere vaduku. Zvimwe zvinonzi kliniki ruzivo haruna kugadzirisa kusiyana kwezvipindure pakati pevakwegura nevaduku vaduku. Nenzira yakawanda, kusarudzwa kweruzhinji kune mutana akwegura kunofanirwa kuve wakangwarira, kazhinji kutanga pamucheto wepasi we dosing range, kuratidza huwandu hwakawanda hwehutachiona hwakaderera, hwechirwere, kana hutano hwemwoyo, uye hwechirwere chinokonzera kana zvimwe zvinodhaka.
Megestrol acetate powder inozivikanwa kuti yakanyanyisa kunzwisiswa nehvo, uye njodzi yekuita tsvina kune ichi chinodhaka inogona kuva yakakura kune varwere vane simba rakaoma rekuita basa. Nemhaka yekuti varwere vakwegura vane mikana yekuderedza renal basa, kutarisirwa kunofanira kutorwa musarudzo yekuita, uye zvingave zvinobatsira kuongorora real function.
♣ Shandisa Vakadzi
Megestrol acetate powder yakashandiswa zvishoma muvakadzi vane HIV vane utachiona. Vose vakadzi vechi10 mumakiriniki ekuedzwa vakarondedzera kupera nekubuda ropa. Megestrol acetate powder is derivedone derivative, iyo inogona kukonzera kubuda ropa mumadzimai.
Chengetedza mishonga iyi mumudziyo iyo yakauya, yakasimba yakavharwa, uye kunze kwekusvika kwevana. Zvichengetedze pamusasa wekupisa uye kure nekupisa kwakanyanya uye unyoro (kwete muimba yekugezera).
Mune mishonga yemishonga inofanirwa kuve yakarongedzwa nenzira dzakakosha yekuvimbisa kuti zvipfuwo, vana, uye vamwe vanhu havagoni kuzvidya. Zvisinei, iwe haufaniri kushandura mishonga iyi pasi peimba yega. Pane kudaro, nzira yakanakisisa yekurapa mishonga yako ndeyokupora mushonga wekudzorera shure. Taura nemunhu wako wemishonga kana kuti taura nemunharaunda yako yemarara / yakashandurazve kuti udzidze nezvemapurogiramu ekudzorera munharaunda yako. tsvaga www.aasraw.com kuti uwane mamwe mashoko kana iwe usingakwanisi kupinda purogiramu yekudzorera.
8. Megestrol acetatemadhara
Megace (megestrol acetate, USP) Oral Suspension ikemikari yakagadzirwa nevanhu yakafanana neyomukadzi hormone progesterone inoshandiswa kurapa kurasikirwa kwechido uye kuora kwekurehwa nekuda kwezvirwere, uye inoshandiswawo mukurapa kenza yepamusoro yepamu uye kenza yemapendometrial. Megace inowanikwa mune maitiro chaiwo. Zvose zvinokonzerwa neMegace dzinosanganisira:
· Kuwanika kuwanda
· Kuchinja mukuda
· Dumbu rinogumbura
· Kupisa kweganda
· Kunetsa kurara (kusuruvara)
· Kuderedza kugona kwepabonde / chido
· Kusava nemhosva
· Kutadza kuva nechirwere
Vakadzi vanogona kuchinjwa pakuenda kumwedzi, kusanganisira kutadza kubuda ropa kwevakadzi Megace Oral Suspension iri 800 mg / zuva (20 mL / zuva). Megace inogona kuwirirana nemishonga yehushuga kana muromo weshuga uye inogona kuderedza migumisiro yemishonga iyi, uye huwandu hwehuga hunogona kuwedzera. Kana iwe une chirwere cheshuga, chengeta shuga yeropa uye taura nachiremba wako kana ukaona kuchinja kusingawanzoitiki. Megace inogona kushamwaridzana ne indinavir, kana kuti insulini kana muromo wemishonga yechirwere cheshuga. Udza chiremba wako mishonga yose uye zvinowedzera zvaunoshandisa. Megace haafaniri kushandiswa panguva yekuzvitakura. Zvinogona kukonzera kukuvadza kumucheche. Vakadzi venguva yekurera vanofanira kushandisa masimba ekuberekwa pavanenge vachishandisa mishonga iyi. Iyi mishonga inogona kudarika mukaka wemvere uye inogona kuva nemigumisiro isina kunaka kune mwana anoyamwa. Kuyamwisa hazvikurudzirwi paunenge uchishandisa ichi chirwere.
Our Megace (megestrol acetate, USP) Maitiro Akashata Drug Centre inopa maonero akazara ezvepo zvinodhaka zvemashoko pamigumisiro inogona kuitika kana uchitora mishonga iyi.
9. Megestrol Acetate Kushandisa Kukura Kwemafuro Kunofanira Kunyatsofungiswa
Megestrol acetate (595-33-5) inonzi progesational agent ine simba rine chido chekudya. Yakatanga kushandiswa semudzidzisi wekudzivirira; zvisinei, rutivi rwakafanana rutivi rwekurema kunotungamirirwa kushandiswa kwayo ikozvino se orexigenic agent. Kutungamirirwa kweM MA kunowedzera kuwedzera kwechido uye kuwedzera kwemuviri kune varwere vane hutachiona hweHIV uye kune avo vane kenza. MA ikozvino Chakudya uye Drug Administration (FDA) inogamuchirwa Kurasikirwa kwehutachiwana hweHIV. Mukuwedzera, vose vari vapenyu, vagari-vagari vakura uye vanhu vakwegura vanogara muzvivako zvekugara kwenguva refu, kushandiswa kweM MA kunowedzera mukuwedzera kwakasimba kwehutano hwemuviri. Kushandiswa kwe orexigenic agents zvakadai saMa MA muzvirongwa izvi zvakakodzera nokuti kurashikirwa kwekurema kwemazivi kwakabatanidzwa nekuwedzera kufa. Zvechokwadi, MA inobatsira zvikuru pamuviri wepanyama uye chido kune mamwe maorexigenic agents zvakadai se dronabinol uye eicospentaenoic acid. Zvisinei, kune vanhu vakwegura nevarwere vane kenza kana kukundikana kwemazino, mafuta ndiye mutungamiriri kana kuti chete inowanikwa yeupfumi, pasina kuwedzera kwemafupa kana zvimwe zvikamu zvemafuta asina mafuta. Pakati pemigumisiro yakawanda yekushandiswa kwe MA, kudzvinyirirwa kwe testosterone uye isrogen yekugadzirwa kunowanikwa. Pamberi pekushandiswa kwevamwe kwehutano hwakanaka uyerorogen ekuderedza (flutamide, bicalutamide) mune varume vane kenza yeprostate, MA yaiwanzoshandiswa mumamiriro ezvinhu aya. Zvechokwadi, kune varume vakwegura, kushandiswa kweM MA kunowedzera mu-near-castrate mazinga e testosterone. MA yakashandiswawo kudzivisa maitiro eesrogen muvakadzi vane kenza yemazamu.
Chidzidzo chakabudiswa mwedzi uno muna JCEM chakaongorora kusangana kwezviitiko zve testosterone uye MA pamusoro pehuwandu hwekuwedzera kuwedzera kune varwere vane hutachiona hweHIV. Chidzidzo ichi chinoratidza, zvakare, kuti MA ine simba guru pane chido uye kuyerwa kwemuviri, nemafuta kunowana chikamu chikuru chekuwedzera kwehutano hwemuviri. Zvisinei, mafuta asina-mafuta akawedzerwa pamwe chete nehuwandu hwehutano hwemuviri mumuedzo uyu, wakafanana nekuongororwa kwekare kwechiitiko che MA pakuwedzera kwehutano kuvarwere vane HIV inobatanidzwa nekurasikirwa kwemahombekombe. Mulligan et al.Chiratidza kuti testosterone yakadzingwa, uye kuparidzirwa kwe testosterone kwakanga kusina simba pakuumbwa kwemutoro wekurema; uyezve, MA hutungamiri hwakaguma nekuderedza libido. Izvi zvinodzvinyirira ma MA pamutambo we testosterone uye mukudzivirira migumisiro ye testosterone pamusana wemuviri kuwedzerwa kuwanda kunofanira kunyatsoongororwa vasati vashandisa MA mune varwere ava. Kurasikirwa kwehutachiona hwevatachiona hweHIV hunobatanidzwa zvakasimba nemazinga e-androgen akadzika.
Mimwe mibvunzo isina kupindurwa pamusoro pemigumisiro ye MA inoramba iripo. Kushandiswa kwaro kunofanira kunyatsoongororwa uye kunyatsogadziriswa. Kana kugadziridzwa mune zvekudya uye pfuma muhuwandu hwemafuta ndizvo zvinangwa zvakakosha mukutarisira kwecachexia kana kusazvipira kuora muviri, MA inoramba iine imwe yearexigenic inonyanya kushandiswa iye zvino inowanika. Kushandiswa kwaro kunofanira kuyerwa nekukwanisa kubhadhara kudzvinyirira uye kubviswa kwe androgen production. Nemhaka yehutachiona hwayo antiandrogen, antianabolic zvinokonzerwa neMa MA hazvisimbiswi ne testosterone administration.
10. Ndeipi iyo inonyanya kukosha yeruzivo rwandinofanira kuziva pamusoro peMegestrol Acetatepowder?
Megestrol acetate powder inogona kukuvadza mwana asati aberekwa kana kukonzera kukanganisa kuberekwa. Usashandisa megestrol kana iwe uri nepamuviri.
Usati watora megestrol acetate powder, udza chiremba wako kana iwe une chirwere cheshuga kana nhoroondo yekurohwa kana ropa.
Zvido zvako zvinogona kuchinja kana iwe uchivhiyiwa, uri kurwara, uri pasi pedambudziko, kana uine hutachiona. Usashandure mushonga wako wemishonga kana purogiramu pasina zano rechiremba wako.
Megace ES ine yepamusoro yakanyanya ye megestrol acetate powder kupfuura Megace. Kumbira mushonga wemapurisa kana iwe uine mibvunzo pamusoro pemishonga yaunowana pane homisi.
11. Ndingawane kupi kumwe ruzivo pamusoro paMegestrol Acetate?
♣ Zita rezita: Megace®, Megace® ES
Tags: Tenga Megestrol acetate powder, Megestrol acetate powder
Zuva Rini 4-DHEA Inotendeuka Ku Testosterone? Mishonga yekuongororwa J147 (1146963-51-0) Kurwara kweAlzheimer